राष्ट्रपति चुक्नुभयो, सर्वोच्चको ध्यान पुगोस् : पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव – साँचो खबर
राष्ट्रपति चुक्नुभयो, सर्वोच्चको ध्यान पुगोस् : पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव
सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपति सदर गर्ने निर्णय राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक रूपमा अमिल्दो रहेको उनले बताए । ‘नेपाली जनताले आशीर्वाद दिएर पुर्‍याएको संस्थाको विषयमा यसअघि मैले कहिल्यै पनि टिप्पणी गरेको थिइन, आज अत्यन्त मर्माहित भएर यो कुरा भनिरहेको छु,’ गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवले भने, ‘म मात्रै होइन, तीन करोड जनता मर्माहित भएका छन् । त्यो संस्थामा चोट पुगेको छ ।’
जनताको सर्वोच्च निकाय संसदबाटै समस्याको छिनोफानो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको ध्यान पुग्नुपर्ने उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यो विषयमा ध्यान पुगोस्, ध्यान पुग्नैपर्छ भन्ने विनम्र आग्रह पनि छ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा अतिव्यापारीकरण र दलीय प्रभाव बढेकोप्रति उनको चिन्ता थियो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राजनीतिक सोच र प्रतिबद्धताको अभाव भएको डा. यादवको भनाइ छ । गरिबी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय, महिला, तेस्रो लिंगीलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न राज्य चुक्न नहुने उनको सुझाव छ । उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा डा. यादवको जोड थियो ।
Previous: ओलीमाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिन निर्वाचन आयोग गए लिलामणि पोखरेल
Next: नयाँ स्वरुपमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाहिर गएपछि फेरि लकडाउन